मिनेन्द्र रिजालको प्रश्न, ‘एमसिसी पास नभए प्रशारण लाइनको काम कुन स्रोतले गर्ने ?’ « Naya Page
मिनेन्द्र रिजालको प्रश्न, ‘एमसिसी पास नभए प्रशारण लाइनको काम कुन स्रोतले गर्ने ?’
प्रकाशित मिति : 1 June, 2020 4:55 pm
काठमाडौं, १९ जेठ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आवको बजेटले कोभिड–१९ को रोकथाम र त्यसबाट प्रभावित भएका नागरिकको जीवन रक्षामा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त पार्टीका सांसदले बजेट प्रभावितलाई सम्बोधन गर्नाको साटो अन्यत्रै परिचालन गरिएको टिप्पणी गरे ।
विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले विधेयकमा छलफल गर्ने बेलामा कुन स्रोतबाट पैसा आउँछ भनेर संसदलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन कहाँबाट कसरी रकम आउँछ भनेर स्पष्ट खुलाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए प्रशारण लाइन निर्माणका लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी आएपनि नआएपनि प्रशारण लाइन निर्माण हुने सरकारले भनिरहेको प्रशंगमा उनले एमसीसी नभए स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
बजेट विनियोजन विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा उनले भने, ‘विचार गर्न नै कठिनाइ भयो । एमसीसी आएपनिरनआएपनि प्रशारण लाइन बन्ने भन्नुभएको छ । तर आएन भने त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? संसदले नलिने निर्णय गर्‍यो भने कुनै एउटा योजना काट्नु पर्‍यो के गर्ने ? पार्टीमा यो बहसलाई राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भनेर तपाईको पार्टीको राजनीतिक लडाई संसदले व्यवहोरेर बस्नुपर्ने ? यो पैसा कहाँबाट आउँछ थाहा नपाएर हामीले बस्नुपर्ने ?’
सोही पार्टीका उमा रेग्मीले राम्ररी कोरोनाको उपचार हुन नसकेको अवस्थामा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझँं बजेट स्वास्थ्यभन्दा रक्षातिर केन्द्रित गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । उनले रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई आकर्षित गर्ने बजेट खै भन्ने प्रश्न गरे । बजेट महिलामैत्री समेत नभएको उनको भनाइ थियो ।
सांंसद डिला सङ्ग्रौलाले विनियोजित विधेयक कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाइन् । अपारदर्शी र परम्परागत रुपमा आएको विधेयक कोरोना रोक्ने विषयमा केन्द्रित नभएको उनले बताइन्। सांसद उमाकान्त चौधरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका चुनौती नियन्त्रण गर्नु नै आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कोभिड–१९ रोकथाम र प्रभावित जनताको व्यवस्थापनमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सीमा सुरक्षा र नियमनको व्यवस्था गर्नेमा पनि बजेटले ध्यान नदिएको उनले बताए । छलफलमा पार्वता डिसी चौधरी, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रमोद साह, सञ्यजकुमार गौतम, प्रमिला राईलगायतले बोलेका थिए ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ प्रस्तुत गर्दै मुख्यतः सङ्घीय कोषमाथि व्ययभार हुने गरी सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिइएको बताए । उनले विधेयकमा निकायगत खर्चको किटान समेत भएको जानकारी दिए ।
वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानवापतको खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश र स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको कात्तिक १, माघ १ र वैशाख १ तथा वार्षिक आर्थिक विवरण अर्काे आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
संस्थापन इतरका स्थायी कमिटी सदस्यको निष्कर्ष : समधान दुई अध्यक्षको ‘चोचोमोचो’बाट होइन, विधिबाट
मेलम्चीकोे सुरङमा बेपत्ता इञ्जिनीयरको शव फेला
काठमाडौं, १ साउन । सशस्त्र प्रहरी बलले कम्तीमा दश हजार नयाँ दरबन्दी थप्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव
काठमाडौैं, ३१ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का
काठमाडौैं, ३१ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव